Miyaad i tusi kartaa bogga 10 bogga dambe si aad si ammaan ah u heshid xiriirka lacagta?
Haa, waxaan ku tusi karaa boggaga ugu sareeya 10 bogga si aad ugu iibsato xiriiryo tayo leh fursado yar oo ay ku soo saari karto calan casaan leh Google. Dhab ahaan, geedi socodka dabiiciga ah ee dhismaha dabiiciga ah ayaa ka muhiimsan. Waxaan loola jeedaa websaytka khibrada leh iyo SEOs xirfadlayaal ah ayaa dhawaanahan dib u xaqiijiyay in qiimeynta bogga intarnetka ee inta badan la qaado iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta goobta oo kaliya ilaa 10%. Isla mar ahaantaana, inta kale ee horumarka internetka ku saleysneyn waxay ku xiran tahay xiriirka ugu muhiimsan ee website-ka, oo ku saabsan dib u eegista tayada iyo tayada. Hadaad maskaxda ku hayso - ku dheji fududee, xiriir kasta oo soo galaya boggaaga ama blogka ayaa dhab ahaantii siinaya "cod" oo kale oo lagu qiimeeyo Google laftiisa, iyo sidoo kale inta badan makiinadaha waaweyn ee raadinta marka ay timaaddo siinta booska saxda ah ee liiska SERPs.
Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, dib-u-qabashadahani waxay matalayaan iyaga oo ah kuwo ka badan waxtarka iyo ka faa'iideysiga si loo wanaajiyo jagooyinka hadda ee website-kaaga waqti yar. Laakiin ka hor inta aanad ku tusin 10ka sitimood ee ugu sarreeya ee mudnaantaada iyo dadaalkaaga, u daa inaan wajahno - iibsashada si sax ah iyo ujeedada saxda ah waxay noqon doontaa mid sax ah. In kastoo, waxqabadka oo dhan wuxuu sidoo kale caddayn karaa inuu yahay waxyeello badan, halkii uu ka faa'iideysan lahaa dadaalka. Taasi waa sababta aan u soo jeediyo iyaga oo isticmaalaya daryeel gaar ah iyo samaynta jeegar labalaab ah oo isku xira boggaaga ama blog ka hor intaanay noolaan. Looma baahna in la yiraahdo in helitaanka lacagaha la isku geeyo midba midka ugu weyn ama ka soo jiido (i. e. , goobaha internetka iyo goobaha loogu talagalay is-weydaarsiga miisaanka, iyo sidoo kale xiriir kasta oo raqiis ah oo soo-saara adeegyada kuwaas oo inta badan loo isticmaalo ku-dhalashada tan tayo-hoose oo tayo hoose leh, ka sokow ku dhowaad habka isku-dhafan). Sidaas darteed, xusuusnow waa inaad ku maal gashaa wakhti ku filan oo ku saabsan cilmi baaris haboon ka hor intaadan helin xidhiidh kale oo mushaar ah - xitaa kuwa ka mid ah kuwa ugu sareeya 10 bog. Ka dib markii dhan, ay u soo baxaan si ay u iibsadaan links xiriirka kale ee internetka waxaa laga yaabaa in ay weligeed weligii halis ah oo halis ah.
Ugu sareeya 10 Meelood ee Meelaha Laga Isticmaalayo Bixinta Khadka
Maareynta Xiriirka - waa meesha ugu horeysa ee aan kugula taliyo inaad booqato. Sababtoo ah waxaan adeegsaday adeegyadooda si aan u dhisno boggeyga shabakadayda oo waxaan ku helay wax walba oo sahlan, la isku halleyn karo, iyo ammaan. Maareynta Xirfadaha maahan mid ku suuq-gareeya, sidaas darteed mar walba waxaad iibsan kartaa boga fiicneed ee fiicnaanta ee PageRank si qiimo macquul ah. Ka sokow, qiimaha hoose ee halkan wuxuu ka bilowdaa hal doolar kaliya.
Link Links - ilaha labaad ee laga helo liiska ugu sareeya 10 bog oo gadaal u ah si loo sameeyo heshiis nabdoon. Waxaa ka mid ah dhinacyada ugu xooggan ee mashruucan, si fudud ayaad ugu biiri kartaa bixinta kharashka degdegga ah ee $ 49. Link Links ayaa cadeeyay in ay tahay hab lagu kalsoonaan karo oo si deg-deg ah ula xariirta daabacayaasha saxda ah. Waxaa jira dad badan oo xayeysiiyayaal ah oo raadinaya heshiisyo wanaagsan iyagoo iibsanaya tayo sare leh. Ogsoonow, haddii websaydhkaaga ama blogku uu ku filan yahay, waxaad naftaada u noqon kartaa inaad noqoto mid daabacan. Markaad heshay wax cusub oo tayo leh, tayo leh, iyo waxyaabo si fiican loo beegsaday, dhammaan wixii aad u baahan tahay waa inaad soo gudbisaa goobtaada. Habkaas, waxaad ka qaybqaadaneysaa dhismaha dhabta ah ee macaamiisha dhabta ah si ay lacag u sameeyaan. Ka dib oo dhan, waa wax ku saabsan ganacsiga, ma aha ma?
Backlinks dot COM - waa meesha saddexaad ee ugu caansan ee lagu tixgeliyo iibsashada backlinks. Muuqaalka khaaska ah ee kheyraadkani waa inuu kuu soo bandhigi karo liis gareyn ballaaran oo la heli karo oo la heli karo oo la heli karo oo ku yaalla goobaha PR ee leh awoodda ugu sareysa ee domainka, iyo tiro badan oo ka mid ah bogagga kale ee sadexaad ama blogyada qiimaha u leh bixinta lacagta HQ fiican. Maxaa badanaa - Backlinks dot com waa meel aad u fiican oo loo adeegsado si loo xiro qaar ka mid ah xiriirada qiimaha dheeraadka ah iyo sare u qaadista liiskaaga hadda. Intaa waxaa dheer, in lagu yaqaan ka mid ah bixiyeyaasha xiriirka ugu caansan bixiya ee laga yaabo in laga yaabo in boggaga internetka ee laga yaabo, waxaad ku raaxeysan kartaa nidaamka iibsiga ugu fudud ee ka midka ah 10ka sitimood ee ugu dambeeya - inaad xor u noqotid inaad ku guuleysatid bixinta kaararka deynta, ama adigoo isticmaalaya koontadaada PayPal.
Black Hat Links - waa qalabka Black-SEO SEO kaas oo ku siin kara ku dhawaad ​​xiriir kasta oo aad u baahan tahay - oo leh PR sare, Web 2. 0 la heli karo, da 'awood leh, iyo awoodda, iyo sidoo kale calaamado bulsheed oo kala duwan, iyo in ka badan. Sida aad hore u maleyneyso, Black Hat Links waa bixiye khatar ah oo iibinaya backlinks xirmo waaweyn oo buluug ah oo ku jira darajooyinka ugu adag, halkii ay u bixin lahaayeen kaliya hal ama laba xiriiriye oo lacag ah si loo helo websaydho taxaddar leh iyo mulkiilayaasha ganacsatada internetka. Waxyaabaha kale ee gaarka ah, qalabkani wuxuu ku siin karaa wax kasta oo ku saabsan boqol boqol garasho ama labo - keenista natiijooyin aad u qiyaasan oo sahlan iyo samaynta dhammaantood la arki karo kaliya saacad gudahood. Khadka hoose - iskuday aaladda kaliya haddii aad xirfad u leedahay SEO-ga oo dareemaya geesinimo kugu filan si aad u qaadato khatarta dhabta ah ee ku saabsan isticmaalka Black-SEO SEO iyo kuwa aan si buuxda lahayn "sharciyada".
Hoth - waa qalab wanaagsan oo loogu talagalay dhisidda backlinks gacanta. Dabcan, Hoodku maaha mid aan ugu dambeyntii helin doorashadii ugu fiicnayd ee liiska ugu sarreeya 10 bog. Laakiin waa mid aad u faa'iido leh maaraynta xiriirinta tayada, iyo sidoo kale helitaanka bilawga ah ee muujinta Google. Isku day adeegsigaan iyo hagaajinta waxqabadka boggagaaga miisaanka. Si kastaba ha ahaatee, ogow, ka hor intaadan hore u sii socon, hubi inaad haysatid wax kasta oo meel. Waxaan si xooggan ugu talinaynaa inaad iska ilaaliso ficilada wax iibsiga ee aadka u weyn, ugu yaraan jeegareyn labadaba xiriirka ka hor intaanay noolaan. Waxyaabahani waa in sida aadka ah ee software isku xirka khatarta ah ee khatarta ah, qalabka buuggan sidoo kale wuxuu cadeyn karaa inuu si siman u waxyeelayn karo website-kaaga ama blog-kaaga. Si looga hortago natiijadan nasiib-darrada ah, waxaan ku talin lahaa inaad si taxadar leh u dhaqanto inta aad awooddo, gaar ahaan bilawga. Markale mar kale - u soo jiido dibad-baxa inta badan suurtagal ah in dib-u-hagaajinta PR sida ugu macquulsan waa hubaal maaha in wax la sameeyo. Laakiin waa maxay waxa ugu fiican? Wax walbaa waa in dhammaanba aad u baahan tahay halkan inaad ka fogaato inaad noqoto mid geesinimo leh, haddii aadan rabin inaad ka shakisid aragtida makiinadaha waaweyn ee raadinta. Qofna ma doonayo inuu helo ganaaxa Google, sax? Marka, kaliya sii wad inaad si joogto ah u shaqeyso kaliya tartiib tartiib tartiib ah - marka aad ogaatey in qayb ka mid ah keywords muhiim ah aad u hesho horumar gaar ah oo wanaagsan oo ku socda sare ee SERPs, aad ugu dambeyntii dardar-gelin iyo bilaabi iibsashada badan oo xiriir badan - si tartiib tartiib ah u dhaqaaqaya ujedadaada ugu dambeysa iyo inaad si joogto ah ula socotid xaaladaada hadda jirta iyo qalabka falanqaynta dhabarka.
Fiverr - qalab kale oo caan ah oo bixiya adeegyo isku xirnaanta isku xirnaanta jadwalka nidaamsan. Maskaxda ku hay, sida qalab kale oo isku-dhejis ah, Fiverr waxay noqon kartaa meel khatar ah - markaa fiiri! Kaliya ha ku dhaafin tirada markaad ku dareyso xiriirka cusub ee mushahar bixinta, oo samee jeeg laba kiilo si aad ula macaamilato keliya khibrad iyo dadka ugu kalsoon ee halkaa jooga.
Up Work - waa meesha ugu dambaysa ee ugu fiican ee laga helo liiska meelaha ugu dambeeya ee gadaasha. Laakiin nabadgelyadu marwalba way kugu kacayaan lacag caddaan ah oo dheeraad ah, sax ah? Waxaan loola jeedaa in Up Work waxay ku shaqeynayaan guud ahaan bulshada xirfad shaqaale leh. Haa, qiimaha sicirkoodu waxay mararka qaar noqon karaan kuwo aan qallafsaneyn, laakiin adeegu wali waa mid ka mid ah kuwa ugu macquulsan si ay heshiis ula galaan dhabarka dambe. Sidaa darteed, marwalba waxaad ogaan doontaa ugu yaraan waxa aad bixinayso.
Dadka Per Hour - waa magaca labaad ee ugu fiican dunida oo dhan. Ka mid ah sifooyinka ugu sarreeya, bulshadan isboortiga ah waxay bixin kartaa dib-u-celin heer sare ah ee PR-ga ah oo ay la socdaan Daawo raac qof kasta oo doonaya in uu bixiyo. Iyadoo la tixgelinayo natiijada laga filayo dhamaanba tobanka kooxood ee ugu sarreeya (i. e. , kobcinta rasmiga ah ee jagooyinka rikoodhka raadinta ee bogga keliya ama blog), Dadka Per Hour ayaa shaqeynaya ugu dambeyntii way ka fiican yihiin cid kale oo ku jirta bogga. Waa maxay sababta? Sababta oo ah bulshadan isboortiga ah ee xirfad leh ayaa xirfad leh ku filan si ay u bixiso taageerada ugu awoodda badan, waa inaan qirto. Waxaa jira kumanaan qof oo xor ah oo xor ah oo aad u xeel dheer iyaga oo halkaas jooga si ay kuu siiyaan dib-u-dhiska rasmiga ee PR oo leh "Follow Follow" oo ka yimid ilo kala duwan oo leh awood aad u sareeya iyo PageRank, sida HuffPost, IBM, The Next Web, iyo magacyo kale oo badan ee ka mid ah kooxda ugu fiican dunida oo si fiican loo yaqaan by inta badan noo.
Ka iibso Backlinks Backlinks Point COM - waxaa loo yaqaanaa meesha ugu habboon ee lagu daawado boggagaaga ama blogka kor u kaca ee ugu sarreeya SERPs Google - sida gantaal. Kooxdayada ugu sareysa ee SEOs iyo websaydhyada ka ciyaara in ka badan 15 sano ee warshadaha waxay ku siin karaan rikoor heer sare ah oo cajiib ah la leh Follow Follow backlinks iibiyey in bulk.
Backlinks Rocket - ma aha oo keliya meelaha ugu sareeya 10 bog oo gadaal ah laakiin bixiyaha SEO ee heerka caalami. Adiga oo bixiya kala duwanaansho macquul ah oo ah xirmooyin lacag ah oo ka bilaabma $ 59 illaa qiyaastii boqol doolar, Backlinks Rocket ayaa kaa caawin kara heshiisyada yaryar - oo bixinaya dib u celinta EDU. Dadka qaar ayaa aaminsan in isku-xirka waxbarasho kaliya uu ka fiican yahay 100 qof oo caadi ah.
Link Wheel Pro - waa xulasho dheeraad ah, oo aan ku haboonayn liiskaygii ugu sareeyay 10 bog. Dabcan, meeshan waa khatar aad u halis ah iyada oo ay soo jeedinayso in qadar xoog leh oo dhab ah ay ku saleysan yihiin is-dhaafsiga is-weydaarsiga iyo qaar kale oo aan si fiican loo isku hallaynin. Si kastaba ha ahaatee, bixinta waxbarashada qiimaha ugu muhiimsan iyo xitaa dawladaha, Link Wheel Pro wuxuu u muuqdaa mid aad u soo jiidasho leh oo khamaaraya, miyaanay ahayn? Ka dib oo dhan, ciyaar weyn ayaa mar walba macnaheedu yahay in la qaato khatar weyn. Si kastaba ha noqotee, weli waa uun kaliya inaad go'aansato Source .